गत आर्थिक वर्षमा एनएमबि फिफ्टीको नाफा १ अर्बभन्दा बढी - Aarthiknews
गत आर्थिक वर्षमा एनएमबि फिफ्टीको नाफा १ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौं । एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको एनएमबि फिफ्टीले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा रू. १ अर्ब ६ करोड ९३ लाख १३ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा यस योजनको नाफा रू. ११ करोड २६ लाख १९ हजार रहेको थियो ।
गत वर्ष योजनाको आम्दानी रू. १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी भएको छ भने जम्मा खर्च रू. ३ करोड ३२ लाखभन्दा बढी छ । योजनाको पूँजी रू. १ अर्ब २५ करोड रहेको छ भने जगेडा तथा कोषहरु रू. १ अर्ब ११ करोड ९६ लाखभन्दा बढी छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस योजनको प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य रू. १८ दशमलव ९६ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिसम्म यो मूल्य रू. १० दशमलव ९० रहेको थियो । योजनाको कूल सम्पत्ति रू. २ अर्ब ३८ करोड २ लाखभन्दा बढी रहेको छ भने कूल दायित्व रू. १ करोड ५ लाखभन्दा बढी छ ।